I-Bantam Lake waterfront kanye nolwandle oluyimfihlo - I-Airbnb
I-Bantam Lake waterfront kanye nolwandle oluyimfihlo
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Kathy
Indlu enhle ekhanyayo nenelanga enohlelo lwaphansi lwesimanje oluvulekile ogwini oluthule lwasentshonalanga yeBantam Lake. Ukubukwa okuhle futhi kuvikelwe emoyeni ogwini oluyimfihlo olunesihlabathi. Ilungele imindeni kanye nabahlali besitezi sokuqala kuphela. Sicela uqaphele: maphakathi noJuni kuya kuSuku Lwabasebenzi kudinga ukuqashwa kwamaminithi angu-7 ebusuku kuphela.
Leli khaya lesimanjemanje nelihlome ngokugcwele lika-A-frame lihlala ogwini oluhle olusentshonalanga ye-Connecticut's Bantam Lake. Jabulela ukuhlala okulula esitezi sokuqala ngekamelo lokulala elikhulu, (umbhede wendlovukazi) ikhabethe lokungena kanye negumbi lokugezela elikhulu elifaka ishawa elikhulu lokungena kanye nobhavu wokucwilisa oweqile. Futhi, esitezi sokuqala kunegumbi lokugezela elinguhhafu, ikhishi kanye negumbi elikhulu lokuwasha (iminyango yesayizi yokukhubazeka). Usofa wegumbi lokuphumula elingaphansi udonsela endlini yokulala yendlovukazi.
Isitezi sesibili sinamagumbi okulala angu-2 engeziwe: elilodwa elinombhede wendlovukazi, nelilodwa elinemibhede engamawele angu-3 kanye ne-trundle ukuze lelo gumbi lilale 4). Kukhona enye indawo yokugezela egcwele, kanye nendawo ephezulu ephezulu ethokomele engasetshenziswa njengegumbi lezingane, umhume noma indawo yokulala eyengeziwe (i-futon ingusayizi wendlovukazi). Ukubuka kweLake Bantam kuhle kakhulu, futhi ukuphuma kwelanga kuhlala kukuhle.
Noma yimuphi umpheme ophuma emoyeni ngaphandle kwegumbi lokuhlala unikeza indawo yokudlela eyengeziwe ye-al fresco futhi iyindawo enhle yokuphumula nokulalela ithanga lamanzi ogwini olunesihlabathi ngezansi nje.
I-cul de sac / umgwaqo ophelile oshonile. Izindlu eziyisi-6 kuphela emgwaqweni. Indawo enhle ephephile yezingane